[I-Tribune] I-DRC: Isu likaFélix Tshisekedi - JeuneAfrique.com - Thumela RELAY
[I-Tribune] I-DRC: Isu likaFeliz Tshisekedi - i-JeuneAfrique.com
By TELES RELAY	 On I-Decc 10, i-2019
UKate Middleton ukubheja ngombala ongokomfanekiso kokuqala kwakhe…
Avertissement du prince Harry: Duke a dit à Meghan que ses plans…
I-India: UPavan Varma ubuza uNitish Kumar kwinhlangano ye-BJP-JD…
Ngokukhetha ukuhlangana noJoseph Kabila, umongameli waseCongo ukhombisa ubuciko obuthile, uma nje edinga umlingani neningi lePhalamende ukufeza ezinye zezinto zakhe. izithembiso zomkhankaso.
Futhi uma umbono womdlalo, kulokhu "inkinga yomhambi," njengoba yakhelwe nguKaushik Basu ekuqaleni kwe-1990, kungasisiza ukuthi siqonde ngokwenzekayo eKinshasa njengoba uFelik Tshisekedi wakhethwa ukuba ngumongameli weDemocratic Republic of Congo (DRC)? I-hypothesis ayifinyeleleki kangako kunokuba ibukeka.
Ukuyiqonda, kufanele sibuyele esimweni esabekwa yisazi sezomnotho saseNdiya. Ake sithi, kusho uKaushik Basu, ukuthi abantu ababili abangazanayo futhi bobabili bathenga into efanayo yasendulo endizeni eyodwa. Lapho nje sebefikile lapho beya khona, bayabona ukuthi izinto sezonakalisiwe futhi bafuna isinxephezelo. Njengoba ingenawo umbono ngenani labo, inhloko yezindiza ibuza ngamunye wabo, ngokwehlukana, ukulinganisa inani layo.
Uma bobabili bebona inamba efanayo, uzobheka ukuthi kuyinani langempela futhi uzobakhokhela leyo nani. Uma bebona amanani ahlukile, uzokucabanga ukuthi ophansi kunabo bonke, uzokhokha ibhonasi kumlobi wakhe futhi uzokhipha inhlawulo kulowo obhale okuphezulu, ecabanga ukuthi usezame ukumkhohlisa. Ngamanye amagama, umuntu angenza ukukhetha okungaqondakali noma okungenangqondo (kulokhu ukumemezela inani elincane) futhi athole inzuzo enkulu.
Bunjani ubudlelwano nepolitiki yaseCongo? Iza kuqala amandla ngoJanuwari 2019, UFelix Tshisekedi usungule uhulumeni wobumbano neCommon Front for Congo (FCC), umfelandawonye kaJoseph Kabila. Kepha ukungezwani okuningi kuwela kule nyunyana yezimo. Ekuqaleni kukaNovemba, izingqwembe ezazinezithombe zikamongameli zacekelwa phansi ngisho nangabasekeli babanduleli bakhe, kwathi okuphambene nalokho. Kungani-ke uTshisekedi engabeki ubumbano phakathi kwakhe nendoda ayibiza ngokuthi "uyindlovukayiphikiswa" ngenkathi isembusweni? Izuzani?
Inhloko entsha yombuso empeleni ifana nomunye wabahambi ababili bakaKaushik Basu, ngaphandle kokuthi lolu hambo kuye luya okhethweni nokuthi lokho akutholile kungamandla. Sekwedlule izinyanga eziyishumi nanye selokhu kwavota. Kodwa noma ngabe abanye bekhumbuza ukuthi nguyena ophethe selokhu ikhomishini yezokhetho neNkantolo YoMthethosisekelo imemezele ukunqoba kwakhe, umongameli waseCongo uhlala ebuzwa ukuthi uyini ngempela amandla akhe kanye nokufanele umfelandawonye wakhe nomlingani onezintshisakalo ezingekho emthethweni.
Kepha uFelix Tshisekedi, njengomhambi "othembekile" omkhulu kaKaushik Basu, akasiniki isibambiso. Akakhombisi nhlobo yamandla amakhulu. Akashongo yini ukuthi wayengahlosile 'ukuzulazula' esikhathini esidlule sabahlonishwayo embusweni wakudala, noma ngabe akwazi futhi ukuthi, ekuqaleni kokubona, angathola inzuzo ebonakalayo ? Akenzi yini isinqumo esingenangqondo ngokubathembisa ukungazitholi nokungabonisi amandla akhe?
Felix Tshisekedi temporisa
Eqinisweni, inketho enhle kunazo zonke yeTshisekedi ukwenza okwesikhashana nokukhuthaza ukuncipha ekusebenzeni kwakhe noJoseph Kabila. Ngokukhetha ukusebenzisana nalowo owandulelayo, uyakufakazisa lokho ukucabanga okuthile, uma kuphela ngoba edinga umlingani neningi lePhalamende ukufeza ezinye zezithembiso zakhe zomkhankaso. Masingakhohlwa ukuthi kumele akwazi ukufaka isicelo sephepha lokulinganisa uma efuna ukuqokwa kabusha kwi-2023!
Ukuphetha, khumbula ukuthi uFelix Tshisekedi akayona imali. Angenza izinguquko ezinhlokweni zamasosha nezinsizakalo zezokuphepha ezaziwa ukuthi ziseduze kwalowo owayengumongameli - ucabanga ngakho. Kungaphazamisa nePhalamende futhi kubambe nokhetho lwasephalamende lwakudala e2020, ngethemba lokuzuza iningi lazo.
TELES RELAY 11928 izikhala 0 amazwana
ICPDM iwina izihlalo ze35 esiShayamthetho Sikazwelonke ngaphambi kwevoti
INkosana uCharles yabikezela ukuthi izothweswa icala lokudlanga kwePrincess Diana - VIDEO
UKate Middleton ubheja ngombala ongokomfanekiso ukubukeka kwakhe kokuqala kusukela…
Avertissement du prince Harry: Duke a dit à Meghan que ses plans futurs se…
ENdiya: UPavan Varma ubuza uNitish Kumar kwinhlangano ebambisene ne-BJP-JD (U) eDelhi e…
Ama-Michel Cymes: kungani ama-hugs elungele impilo yakho - VIDEO
Iphephandaba lesi-8 ekuseni likaJanuwari 16, 2020 - VIDEO
Abantu: Abahlabeleli abahle kakhulu e-Afrika
Nge-12,2 billion eyodwa eyatholakala, i-2019 ibingcono kakhulu ...
UMessi-Ronaldo ezweni elihle kunazo zonke leminyaka eyishumi! Kepha kuphi ...
[Ikholamu] Ibhola: Ukuphindisela kukaSadio Mané - JeuneAfrique.com
UChad: Unobhala-Jikelele weHhovisi likaMongameli oboshelwe…
I-India: Udlame lwe-JNU: Umsolwa oqokiwe, u-Aishe uphonsela inselelo amaphoyisa ...
Amaphoyisa nababhikishi baxabana phambi kweClasico…
UJarry: le nkulumo evela kumawele akhe "angamenza ...